Raiisul Wasaare ayaa lagu dhawaaqay - BBC Somali
Raiisul Wasaare ayaa lagu dhawaaqay
12 Disembar 2013
Image caption Raiisul Wasaaraha la magacaabay ee Soomaaliya Cabdiweli Axmed Shiikh
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa goor dhaweyd u magacaabay Raiisul Wasaaraha Soomaaliya inuu noqdo, Cabdiweli Axmed Shiikh.
Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed, Waa dhaqaale-yaqaan jagooyin sar-sare ka soo qabtay muddo 20 sano ka badan hay'adaha Bangiga waddanka Canada, Bangiga adduunka, USAID, Midowga Afrika, COMESA, Midowga Yurub, Bangiga horumarinta Islaamka iyo qaar kaloo badan.
Waxaa uu muddo sannado ah la shaqeynayay hay'ado ka tirsan Qaramada Midoobay, guddiga dhaqaalaha ee Afrika, urur-goboleedka Galbeedka Afrika ee ECOWAS, ururka iskaashiga Islaamka, ururka jaamacadda Carabta ee horumarinta beeraha, urur-goboleedka IGAD, urur-goboleedka golaha iskaashiga khaliijka, sanduuqa Sacuudiga, sanduuqa Kuwait, Qadar, bangiga horumarinta Asia, bangiga horumarinta Afrika iyo qaar kaloo badan.
Cabdiweli Sheekh Axmed waxaa uu ku dhashay magaalada Baardheere sanadkii 1959kii, waxaa uu haystaa labo dhalasho: Somali iyo Canadian.
Waxaa uu si aad u fiican ugu hadlaa, marka laga yimaad Soomaaliga, afafka Ingiriiska, Carabiga, Talyaaniga iyo faransiis wanaagsan. Waxaa uu socdaallo shaqo ah ku maray in ka badan 100 waddan, waxaana uu ka shaqeeyay 11 waddan oo ay ka midka yihiin: Somalia, Kenya, Ethiopia, Djibouti, Zambia, Masar, Canada, Yemen, Sacuudiga, Immaaraadka Carabta Iyo Malaysia.